रोकिएन भूकम्पको धक्का ज्यान गुमाउनेको संख्बया आठ हजार नाघ्यो जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
रोकिएन भूकम्पको धक्का ज्यान गुमाउनेको संख्बया आठ हजार नाघ्यो
आईतबार २७ ब‌ैशाख, २०७२
जनबोली/ २७ वैशाख, काठमाडौ । महाभूकम्प गएको १६ औं दिन पनि भूकम्पको धक्का महशुस हुने क्रम रोकिएको छैन। आइतबार विहान ११ बजेर ८ मिनेटमा रसुवा केन्द्र विन्दु भएको ४ रोक्टोस्केलको भूकम्प गएको छ।
राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार आइतबार नै विहान ६ बजेर ३४ मिनेटमा सिन्धुपाल्चोकलाई केन्द्र विन्दु बनाएर ४ दशमलव ४ रोक्टोस्केलको भूकम्पको धक्का महशुस गरिएको थियो भने राति १ बजेर ५० मिनेटमा सिन्धुपाल्चोक– तिब्बत केन्द्रविन्दु बनाएर ४ दशमलव २ रोक्टोस्केलको भूकम्प गएको केन्द्रले जनाएको छ। योसँग महाभूकम्पपछि हालसम्म १ सय ५६ पराकम्पन गएको छ।
यसैबीच महाविनाशकारी भूकम्पमा परी मृत्यु हुनेको संख्या आठ हजार नाघेको छ। आइतबार विहानसम्ममा मृत्यु हुनेको संख्या ८ हजार १९ पुगेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। यसैगरी घाइतेको संख्या १६ हजार ३३ पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। मृतकमध्ये अहिलेसम्म ३० जनाको सनाखत हुन नसकेको छैन।
भूकम्पमा नेपाल प्रहरीका ५, सशस्त्रका १, निजामति कर्मचारी ११ तथा विदेशी नागरिक ७० जनाको मृत्यु भएको छ। यसैगरी नेपाल प्रहरीका १४०, सशस्त्र प्रहरीका २१, र विदेशी नागरिक ५० जना घाइते भएका छन्। यसैगरी नेपाल प्रहरीका १, नेपाली नागरिक २५४ र विदेशी नागरिक १११ जना हराइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
सैनिक विमान दुर्घटनामा २६ जनाको मृत्युपछि राष्ट्रिय शोक घोषणा
काम गर्न नसकेपछि लेबनानका प्रधानमन्त्रीद्वारा राजिनामा
संसारभरी सेयर, असम्भव तर चमत्कार : ३ महिनामा जन्मिएकी नानी हुर्किदैछिन् !
लहरो तान्दा पहरै आयो : सारा अलि र श्रद्धा कपुरको अति गोप्यताको खुलासा
सूर्य थापा जनताको करले भत्ता पचाएर जनताबारे त्यस्तो टिप्पणी गर्न पदिय हैसियतले दिन्छ ?
दुनियाँमा तरंग आएको दीपिकाको गोप्य च्याट : ‘मा’ल छ ? … !